Shiinaha Gelatin 40 mesh warshad iyo alaableyda | Gelken
Marka loo eego mesh, gelatin la cuni karo waxaa loo qaybin karaa shan qaybood sida hoos ku xusan:
Mesh kala duwan u dhigma tirada walxaha kala duwan. Hadba meshka weyni waa, kan ugu fiican ee walxaha waa. Suuqa hadda jira, gelatin 40 mesh ayaa si ballaaran loo adeegsadaa.
Gelatin 40 mesh waa colloid difaac wax ku ool ah, kaas oo ka hortagi kara isu geynta kristantarrada ama ion-yada. Waxaa loo isticmaalaa in lagu xasiliyo hakin kaladuwan waxaana loo isticmaalaa sidii emulsifier-ka saliida ku jira kala firdhinta biyaha.
Gelatin 40 mesh sidoo kale wuxuu leeyahay astaamo farsamo oo aad u fiican, sida haynta biyaha, sameynta filimka, emulsification iyo xumbada.
Oo waxaan ku siinnaa gelatin laga bilaabo 8 mesh illaa 60 mesh
Gelken gelatin wuxuu ku siin karaa xalal kala duwan oo habaysan habka iyo shuruudaha macaamiisha shaqsiyeed. Gelken gelatin wuxuu ku habboon yahay in loo isticmaalo sida wakiilka jilicsanaanta, xasiliyaha, xabagta, emulsifier, filimka iyo wakiilka xumbada, kareynaya gargaarka iyo side. Badeecada waxaa lagu dari karaa wax soo saarka cuntada si loo yareeyo baruurta, karbohaydraytka iyo kalooriyada ku jirta sheyga, ama si loo kobciyo borotiinkeeda isla markaana loo wanaajiyo dhadhanka badeecada. Si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha.
Khubarada gelatin ee Gelken maahan oo kaliya inay macaamiisha ka taageeraan soo saarista alaab cusub, laakiin sidoo kale waxay hagaajinayaan qaaciddada jirta. Fursadahayagu waa kuwo aan xad lahayn. Laga soo bilaabo fudge, fudge caw, marshmallow ilaa dhammaan noocyada macmacaanka, yogurt, jalaato, glaze cake iyo walxaha ilaa jam, waxyaabaha hilibka iyo wixii la mid ah, waxaan ku siin karnaa taageero degaan oo lagu kalsoonaan karo.
Gelatinkeennu waa cunno borotiin saafi ah oo tayo sare leh oo ay soo saaraan alaab ceyriin oo tayo sare leh iyo tas-hiilaadka warshadaha ee ugu horumarsan. Qalabka ceyriinka ah ee gelatin waa doofaarro, hilib lo'aad ama kalluun. Tayada gelatin waxaa damaanad qaadi kara tikniyoolajiyad tayo sare leh. Jiekang gelatin waa soo saare caalami ah oo caan ah gelatin, collagen iyo peptides collagen. Waxaan u adeegsanaa waxyaabo nadiif ah oo dabiici ah, saafi ah oo aan xasaasiyad ku laheyn soo saarista cuntada kaliya "sumado nadiif ah".
Hore: Gelatin doofaarka
Xiga: Gelatin 250 Bloom